တ သက် တာ မ ခွဲ စ တမ်း – Hlataw.com
ဟဲ့ ပ ပ နင့် နို့ တွေရော ဖ င်တွေရော ဒီအေ တာအတွင်းမှာ မတရား ကြီးလာတယ်နော် ဟိုကောင်မ ဇ င်မာ လဲ ဒီတိုင်းပဲ ငါ တစ်ယောက်ပဲ သိပ်မထွက်သလိုပဲ . . ပူစူး မ နင် မှို မစားရသေးဘူးလား မှိုစားလိုက် ရင် အလိုလိုကြီးလာတာပေါ့ . . မိုးတွင်းမှ မဟုတ်တာငါက ဘာလို့စားရမှာလဲ ..` နင့် ကို ဖိုးဇော်က သူ့မှိုကြီး မကျွေးဘူးလား .. ကောင်မစုတ် ငါက အကောင်း အောက်မေ့လို့ .. နင် မစားဘူးသေးလို့ ကောင်းမှန်းမသိသေးတာ ငါတို့ကတော့ ကောင်းမှန်းသိလို့ ဖိုးထိန် မှိုကြီးဆို ဘယ်ချိန်လာထားလာထား မောင်ကြံတတို့ပဲ .. ပပ ပြောတော့ ပူစူး ရင်တွေပန်းတွေ တုန်ကုန်တယ်
ပပ နဲ့ ဖိုးထိန် ခိုးလုပ်နေကြတာ သူတွေ့ဘူးတာကိုး ဖိုးထိန် က ပပ ထမိန်ကိုလှန်ပြီး နောက်ကနေ လုပ်နေတာ ပပ က လေးဘက်ထောက်ပြီး ခံနေတာ တအင်းအင်းနဲ့ လူကြီးတွေ စပါးရိတ်သွားတော့ ခိုးလုပ်နေကြတာ ပပ အိမ်ကိုသွားရင်း ပူစူးလဲ အသံတွေကြားလို့ ချောင်းကြည့်မိတာ နောက်တော့ ဖိုးထိန် က လိုးတာရပ်လိုက်ပြီး ပပ ကလဲ သူ့အဝတ်တွေ အကုန်ချွတ်နေတော့တာပဲ ဖိုးထိန်ကလဲ အကုန်ချွတ်တယ် နောက်တော့ ဖိုးထိန်က ပက်လက်အိပ်ပြီး ပပ က ဖိုးထိန် အပေါ်ကနေ တက်ခွတာ ဖိုးထိန် လီး ကိုကိုင်ပြီး စောက်ပတ်ထဲ ထည့်တာ သူတို့ လိုးနေတာကို ပူစူး သေချာကြည့်နေမိခဲ့တယ်
ပပ ကလဲ ဖင်ကို တောက်လျှောက် ဆော့နေသလို ဖိုးထိန် ကလဲ ပပ နို့တွေကို ကိုင်ကိုင်ပြီး ညစ်နေလိုက်တာများ ပပ ကလဲ စောက်ပတ်နဲ့ လိုးနေရင်းကနေ ဖိုးထိန်ကို ကောင်းလား ကောင်းလား မေးမေးနေသေးတယ် နောက်တော့ ကောင်မ မောသွားတယ် ထင်တယ် ဖိုးထိန် အပေါ်ကနေ ဆင်းပြီး ပက်လက်လှန်ပေးတယ် ဖိုးထိန် ထလာတော့ လီး ကြီးက မြင်ရတာများ ပူစူး အသည်းတွေ တကယ်တုန်မိတယ် ဖိုးဇော် ကသာ သူ့ကို အဲလိုများလုပ်ရင်တော့ ဆိုပြီး ဒီလိုနဲ့ ပူစူးမ စိတ်ကူးတွေ ယဉ်ခဲ့ရတဲ့ ရက်တွေ နောက် နှစ်ရက်ဆိုရင်တော့ ပူစူးမ စိတ်ကူးတွေ ဖြစ်လာပါစေ လို့ပဲ ဆုတောင်းရတော့မှာပဲ ဖိုးဇော် သူ့ကို သရက်ကုန်းက ဘုရားကိုသွားဖို့ချိန်းထားတယ် အဲနေရာက ရွာနဲ့ အဆက်ပြတ်တယ် ဘုရားကုန်း ဟိုဘက်အခြမ်း တောဘက်ကို ဆင်းတဲ့ စောင်းတန်း အဆုံးမှာ လူတွေနားဖို့ ဇရပ်တလုံးရှိတယ်
ဒါပေမယ့် အဲဒီဘက်က ဘယ်သူမှ မဆင်းပါဘူး ဟ်ုဘက်မှာက တောပဲ ရှိတဲ့ဟာ အတွဲတွေချိန်းပြီး လုပ်ကြတဲ့နေရာဆိုတာ တရွာလုံး လိုလို သိကြတာပဲ ဒါဆို ဖိုးဇော် သူ့ကို အဲနေ့လုပ်မှာပဲ ပူစူး ကြိုပြီး ရင်တွေတုန်နေမိတယ် ချိန်းတဲ့ရက်မှာတော့ ပူစူး အသက်ရှုမရတော့ .. ဖိုးဇော် ဖိုးဇော်ရယ် ငါ ငါ အသက်ရှုတွေကြပ်နေပြီဟာ နင်ကလည်း နည်းနည်းတော့ လျှော့အုံးလေ .. မရဘူးဟာ ငါ ဒီနေ့ နင့်ကို ချစ်မှာ… ဘုရား ဘုရား ပူစူး ရငိတွေတုန်လိုက်တာ သူ ချစ်မယ်ဆိုတာကြီးကို ပူစူး သိပြီးသား ပူစူးလဲ ခံချင်လို့ ညက ကောင်းကောင်းတောင် အိပ်ပျော်တာမဟုတ်ဘူး ဖိုးဇော် က မတရား ဖက်ထားပြီး ပူစူး နို့လေးတွေကို အရမ်းစို့နေတာ အရင်တုန်းက နို့စို့ခံသလို မဟုတ်ဘူး ရင်ထဲက တလှပ်လှပ်နဲ့ ကော့ ကော့င်္ပြး ပေးနေမိပြန်တယ် ကိုင်ပေးနေကျ သူ့ လီးကြီးကိုလဲ ကိုင်ချင်နေမိတယ်
ခြေထောက်တွေကလဲ ပူစူး ကို ခွထားလိုက်တာများ ပူးကပ်ပြီး အရှိန်ကလေး ရလာတုန်း ရှိသေးတယ် ဖိုးဇော် က ပူစူး ကိုလွှတ်ပေးပြီး ထမိန်ကို ဖြေတယ် ပြီးတော့ ဆွဲချွတ်တော့ ထမိန်က ဖင်နဲ့ပိနေတာနဲ့ ခါးကော့ပေးလိုက်ရတယ် ဖိုးဇော် တကယ်ဆိုးတယ် အပေါ်တပိုင်းလုံးလဲ တအားချွတ်လို့ ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး အခုလဲ ချွတ်ပြန်ပြီ ပူစူး တကိုယ်လုံးလဲ ပင်တီ အဝါလေးပဲ ကျန်တော့တယ် ဒါလဲ ဖိုးဇော် က ချွတ်နေလေတော့ ချွတ်လို့ရအောင် ဖင်ကို တခါ ထပ်ကော့ပေးရသေးတယ်
ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ကိုယ့်ရည်းစားနဲ့ ကိုယ်ပဲဟာ ချွတ်လဲဘာမှ မဖြစ်ဘူး အရင်တုန်းကလဲ ဖိုးဇော် တကိုယ်လုံး အကုန် နှိုက်နေတာပဲ ဒီနေ့မှပဲ စိတ်ကူးယဉ်သလို တကယ်ကြီး အလိုးခံရတော့မှာ ဒီနေ့ အဓိက လုပ်ရမှာက ဖိုးဇော်နဲ့ လိုးဖို့ပဲ ပူစူး တကိုယ်လုံး ချွတ်ပေးရတော့မှာပေါ့ ဖိုးဇော် သူ့တီရှပ်ရော ပုဆိုးကိုပါ ချွတ်လိုက်တော့ ပူစူး မြင်လိုက်ရတာက မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ ဖိုးဇော် ပြီးတော့ ထင်းထင်း ကြီး ကို တောင်နေတဲ့ လီးကြီး အရင်ကတည်းက ပူစူး သူ့ကို လက်နဲ့ လုပ်ပေးနေကျပါ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ပူစူး ရင်တွေတုန်လိုက်တာ တံတွေးတောင်မြိုချမိတယ် ငါ့ စောက်ပတ်ကလေးကို လိုးမယ့် လီးကြီးဆိုပြီး ဖိုးဇော် အသာလေး ပူစူး ပေါင်ကြားမှာ ဝင်လိုက်ပြီး ပူစူး စောက်ပတ်ကလေးကို လက်နဲ့ ပွတ်နေသေးတယ် ဖိုးဇော်ရယ် လုပ်မှာသာ လုပ်ပါတော့ဟယ်
တခါ ပူစူး နို့တွေကို လာစို့နေပြန်ပြီ နို့တွေ စို့နေရင်းကနေ ဗိုက် ဗိုက် ပြီးတော့ .. အာ — ဖိုး ဖိုးဇော်ရယ် အိုး— အာ ဟာ– ဖိုးဇော် ဖိုးဇော် .. ချစ်လို့ပါ ပူစူးလေးရယ် ငါ နင့်ကို အရမ်းချစ်လို့ပါ .. ပူစူး ဘယ်လို နေရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး စောက်ပတ်လေးကို ယက်ပေးနေတော့လေ .. နင် နင် ကလဲဟာ ငါ ငါ လဲ ရေ ရေချိုးလာပါတယ် အာ အာ ဖိုးဖော် ဖိုးဇော် အောက် အောက်နားလေးကို အောက်ကိုရွှေ့လေ အင်း အင်း အာ ဖိုးဇော် ဖိုးဇော်ရာ သေတော့မှာပဲဟာ ဟင့် အဲတာ အဲတာ ဟုတ်တယ် အဲတာ အ အာ အာ .. ဖိုးဇော်က စောက်ပတ်ကို လက်နဲ့သာ နေရာစုံအောင် လုပ်ပေးဘူးတာ ဒီလိုမျိုး တခါမှ လုပ်ပေးဘူးတာ မဟုတ်ဘူး ပူစူး စိတ်တွေ ဘယ်လိုထကုန်မှန်းကို မသိတော့ဘူး တကိုယ်လုံး စိတ်တွေ ကြွလာသလား အောင်းမေ့ရတယ် ဖိုးဇော် ခေါင်းကိုဆွဲပြီးတော့ကို စောက်ပတ်နဲ့ လျှာ ကို အတင်းထိနေအောင်ကို ဆွဲဆွဲကော့ပွတ်မိပြန်တယ် .
.ဖိုးဇော်ရေ — အာ ငါ့ကို လုပ်ချင်လုပ်ပါတော့ဟာ ငါ မနေတတ်တော့ဘူး ဟင်း အင်း ဖိုးဇော် လာ လာတော့ဟာ … ဖိုးဇော် စောက်ပတ် ယက်နေတာကနေ ထပြီး စောက်ပတ်ကလေးကို လီး လာထိတာသိလိုက်တယ် .. နင် စောက်ပတ်ကို လက်နဲ့ ဖြဲပေးထားလေ .. ပူစူး အလိုလို စောက်ပတ်ကလေးကို ဖြဲပေးမိတယ် ဖိုးဇော် နေရာပြင်လိုက်ပြီး စောက်ပတ်ကို လာထောက်တယ် နခမ်းသားက တင်းကနဲ ဖြစ်သွားပြီး နွေးကနဲ ပူစူး စောက်ပတ်ထဲကို လီး ဝင်ပြီ ဆိုတာ သိလိုက်ပြီ အရင်တုန်းက ဖိုးဇော် လက်နဲ့ လုပ်ပေးသလို မှ မဟုတ်တာ စောက်ပတ်မှာ လီးကြီးက တင်းတင်းကြီး ထိုးဝင်နေတာ .. အ ဟင့် အ အ ရွှီး အင်း ဟင်း … ဖိုးဇော်က သူ့လီးကြီးကို စောက်ပတ်လေးထဲ လိုးထည့်လိုက်တိုင်း တင်းကနဲ တင်းကနဲနဲ့ တထစ်ချင်း လီး က စောက်ပတ်လေးထဲကို နင့် နင့်ပြီး ဝင်ဝင်သွားတာပဲ ကောင်းလိုက်တဲ့ အရသာ ဖိုးဇော် တချက်တိုးတိုင်း ပူစူးလဲ တချက် စောက်ပတ်ကနေ ပြန်ညစ်နေမိတယ် လီး အဆုံးလဲရောက်ရော ပူစူး နို့တွေကို ကိုင်ပြီး နယ်ရင်း .. ပူစူး ငါတို့ လိုးကြမယ်နော် .` ပူစူး အလိုလို ခေါင်းကို ညိတ်မိတယ် .
. အာ အာ အင့် အ ဖိုးဇော်ါ်ရယ် ..` . ကောင်းလိုက်တာဟာ အင့်ဟာ ကောင်းလား ကောင်းလား ပူစူး ငါ့ လီးကြီး ကောင်းလား … .. အင် အ လုပ် လုပ်လေ ကောင်းရင် လုပ် လုပ် ငါလဲ ကောင်းတယ် အ အင်း အ .. ဖိုးဇော် အားရပါးရ လိုးနေတာကို ကြည့်ရင်း ပူစူး စိတ်တွေ ပိုပိုပြီးတော့တောင် ထလာတယ် ဖိုးဇော် လီးနဲ့ လိုးထည့်တုန်းမှာပဲ ကုန်းထပြီးကြည့်တော့ ကိုယ့် စောက်ပတ်ကို တဖတ်ဖတ်နဲ့ လိုးနေတဲ့ ဖိုးဇော် လီး ရဲ့ လမွှေးတွေကို မြင်တော့ ကိုယ့် စောက်ပတ်ကလေးထဲ လိုးတာကို ကြည့်ချင်မိတယ် စိတ်က ထလာတော့ စောက်ပတ်နဲ့ အောက်ကနေ ဖိုးဇော် လိုးတာကို ပြန်ကော့ကော့ပေးနေမိတယ် ပါးစပ်ကလဲ ဖိုးဇော် လိုးပေးတာကို စိတ်ကူးယဉ်တုန်းကတိုင်း အားရပါးရကို လျှောက်အော်မိနေတယ် .
. ဖိုးဇော် ဖိုးဇော် အဲ စောက်ပတ်က နင့် အတွက် နင့် အတွက် လိုး လိုး စောက်ပတ်တွေ ပြဲအောင်လိုး . ဖိုးဇော် အ အာ ငါ့ ငါ့ စောက်ပတ် ကို ကြိုက်လား ကြိုက်ရဲ့လား အ နင် ငါ့ကိုပဲ လိုးရမယ် နင် ငါ့ကိုပဲ ဒီ စောက်ပတ်ကိုပဲ လိုးရမယ် အာ အင်း . သေပါပြီ ဆောက်လီးကြီး ဆောက်လီးကြီး .. ဘယ်သူမှ ရှိတာမှာမှ မဟုတ်တာ ကိုယ့်ရည်းစားနဲ့ကိုယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူး .. ပူစူး ငါ့ လီးကြီးလိုးတာ ကောင်းလား ကောင်းလား နင့်စောက်ပတ်ကတော့ အရမ်းကောင်းတာပဲ လာ လာ ကဲ ကဲဟာ ..` .. မသိဘူး ငါ မသိတော့ဘူး .. မသိလို့ရမလား ကဲ သိပလား အင့်ဟာ အင် သိပလား ..` .. လုပ်သာလုပ်တော့ လုပ် လုပ် အဲတာ နင့်အတွက် အဲဒိဟာက နင်လုပ်ဖို့ ဘယ်သူမှ လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး အဲဒါ နင်လုပ်ဖို့ လုပ် လုပ် သေအောင်လုပ် .. လိုး လိုးစမ်း လိုး အဲတာ နင့် စောက်ပတ် လိုး လိုး သေအောင်လိုးပစ် အဲဒါ နင့်ဟာလေး အီး အ အာ သေပါပြီ ဟင့်အင်း လိုး လုပ် လုပ် ရတယ် ငါ ရတယ် လုပ် လုပ် ကောင်းလား ကောင်းလားလို့ ငါ ကောင်းလား အား အား အား သေပါပြီ အား အား အ စောက်ပတ်ကို ထောင်လိုးတယ်
အ အ ဖိုးဇော် ဖိုးဇော်ရေ အာ အား အာ အင့် . . နင့် စောက်ပတ်က လိုးလို့ ကောင်းတာကိုးဟ ငါတို့ တသက်လုံး ဒီလိုပဲ လိုးမယ် လာထား လာထားစမ်း .. ကောင်းတယ် ဟုတ်လား ဟုတ်လား လိုး လိုး လိုး စမ်း .. နင့် ခြေထောက်တွေ အဲတိုင်း မြှောက်ထား ငါ အပေါ်က တက်မယ် .. အား အ ရက်စက်လိုက်တာ ရက်စက်လိုက်တာ ဖိုးဇော်ရယ် မရဘူး မရတော့ဘူး ငါ အောက်ပြန်ချအုံးမယ် .. ဟငိ့ ဟင့် ဖိုးဇော် ဒီတိုင်းလေးလဲ ကောင်းပါတယ်ဟယ် ဒီတိုင်းလေးလုပ်နော် ဟိုလိုကြီးက အောင့်တယ် နင့်ဟာကြီးက ဟိုးထဲကို သွားသွားထောက်တယ်ဟာ ဒီတိုင်းလေးပဲ ကောင်းတယ် သိလား နော် နော် .. အရည်တွေ သုတ်ဦးဟာ နင့် ထမိန်နဲ့ သုတ်လိုက် ငါ့ လီးမှာ နင့် အရေတွေ အများကြီးပဲ ..` . ဖိုးဖော်နော် နင်လုပ်လို့ ထွက်ကုန်တာ ယူလိုက် ငါသုတ်ပေးမယ် .
. ပူစူး နင် ငါ့ကိုယူရမယ်နော် ကြားလား ငါပြောတာ . အောင်မလေးဟယ် ငါ့ကိုတောင် လိုးနေပြီးမှ ဘာဖြစ်တာတုန်း .. မသိဘူး ချစ်လို့ ကဲ လာထား .. အာ လုပ်ပြီ အ အ အ ကောင်း ကောင်းလား ကောင်းလား .. အားရပါးရ အလိုးခံရတာ နည်းနည်း ကြာလာတော့ တဖြည်းဖြည်း တကိုယ်လုံး တောင့်သလိုလို ဖြစ်လာနေပြီ ပူစူး သိတယ် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဒါ ပူစူး စောက်ရေတွေ ထွက်ချင်နေပြီဆိုတာ စောက်ပတ် အထဲမှာ ဆောက်ရေတွေ တောင့်နေပြီ` အရင် ဖိုးဇော် လက်တွေနဲ့ ကလိတုန်းကလဲ ဒီလိုပဲ ထွက်ကုန်တာပဲ ဒါပေမယ့် အဲတုန်းကတော့ ဖိုးဇော်က လက်တချောင်းပြီးမှ နောက်တချောင်း နောက်ဆုံး သုံးချောင်းဆို အကုန် ထွက်ကုန်တာပဲ အခုတော့ စောက်ရေတွေကလဲ မထွက်ဘူး စောက်ပတ်မှာ တင်းပြီး မထွက်ပဲ ဖြစ်နေတယ် .
. ဖိုးဇော် လိုး လိုး ဟာ လိုးစမ်းပါ အရမ်း အရမ်းလုပ် ငါ ငါ မရတော့ဘူး လိုး လိုး ငါ့ စောက်ပတ်ကို လိုး အား– အား – သေပြီ — အား ဖိုးဇော် ဖိုးဇော် တချက် ဆချက် ဆောင့်ထည့်ပေး ဆောင့် ဆောင့် အရမ်းဆောင့်ဟာ အ ဆောင့် အ အ အား .. အထဲကို ခပ်ပြင်းပြင်းကြီး ထိမိတော့မှပဲ စောက်ပတ်ကနေ စောက်ရေပန်းတော့တယ် စောက်ရေတွေကို ငါးခါလောက် ညစ်ထုတ်ပြီးတော့မှ ကုန်တော့တယ် ဖိုးဇော် ကတော့ လိုး ကောင်းတုန်း စောက်ပတ်ထဲက ကောင်းလိုက်တာများ ဘာနဲ့မှကို မတူဘူး အရင် ဖိုးဇော် လက်နဲ့ လုပ်တုန်းက ဆိုတာ အခုနဲ့များ ဘာမှကို မဆိုင်ဘူး ပူစူး တကိုယ်လုံးလဲ အားမရှိတော့သလို နုန်းကျသွားတာပဲ ဖိူးဇော် ကတော့ ပိုပိုပြီးတော့တောင် လိုးချက်က မြန်နေသေးတယ်
လိုးပါစေလေ ကိုယ့် ချစ်သူပဲ တသက်လုံး အတူတူ လိုးကြရမှာ . ပူစူး ပူစူး ..` ဖိုးဇော် တရှုးရှုး နဲ့ လိုးနေရင်းကနေ ပူစူး စောက်ပတ်ထဲ နွေး ကနဲ နွေးကနဲ သိလိုက်ပါပြီ ဖိုးဇော် အရည်တွေ ဆိုတာကို လီးကြီးကို စောက်ပတ် အဆုံးထည့်ပြီး စောက်ပတ်ထဲမှာ တိုးကနဲ တိုးကနဲ ဖြစ်နေတယ် နောက်တော့ ပူစူး အပေါ်ကို ကိုယ်လုံးကြီးက ကျလာပြီးတော့ အတင်းဖက်ထားတယ် .. ပူစူး မိန်းမရယ် .. အို မိန်းမ တဲ့လား ဖိုးဇော်ရယ် ပူစူး လက်တွေက ဖိုးဇော် ကို တင်းတင်း ဖက်မိတယ် နည်းနည်း ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တော့မှပဲ . ဖိုးဇော် ဖယ်အုံးလေဟာ နင်ကလဲ ထုတ်ပေးအုံးလေ ဘာမှန်းလဲမသိဘူး လူကို အရမ်းလုပ်တာပဲ ဖယ်အုံးဟာ ..ဟင့်အင်း ငါ နင့်ကို ဒီနေ့ တနေကုန်လိုးမှာ ပြီးရင် ညကျရင် ငါတို့ တဲကို ခိုးပြေးမှာ .. ပူစူး ရင်တွေတုန်ကုန်ပြီ ဖိုးဖဇ်ာက ခိုးပြေးမယ်တဲ့ .
. ဘယ် ဖြစ်မလဲ မဖြစ်ဘူး ငါ့ကို အဖေတို့က သတ်လိမ့်မယ် မဖြစ်ဘူး .. ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲ နင်နဲ့ငါ ကြိုက်နေတာ သိနေတာပဲဟာ .. ငါတို့က ငယ် ငယ်သေးလို့ မယူရသေးဘူးလို့ ငါ့ကိုပြောထားတယ် ဖိုးဇော် .. အေး အဲဒါဆိုလဲ ဖင်ကုန်းဟာ .. ဟယ်တော့ ဘာမှလဲ မဆိုင်ပဲနဲ့ .. ကုန်းပေးပါဟာ ငါ လုပ်ကြည့်ချင်နေတာကြာပြီ ဟိုကောင် ဖိုးထိန်ဆို ပြောတာကြာလှပြီ ငါ နင့်ကို သနားလို့ …` .. အလို ဖိုးထိန်က ဘာပြောလို့တုန်း .. နင့်လို ခါးရှည်တွေက ဖင်ကုန်း လိုးပေးမှ စောက်ပတ် အထဲက အားရတာတဲ့ ပပ တို့လို ခါးတိုတွေက သိပ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ ငါ့ လီးကြီးနဲ့ဆို နင်နဲ့ ကဲဟာ ကုန်းပေးဟာ .. ဟာ နင်ကလဲ ကဲ ကဲ နင်က လုပ်ချင်သေးလို့လား ခုပဲ ပြီးသွားတာကို . . လုပ်ချင်တာပေါ့ဟ တနေကုန်ပဲ နင် ကုန်းပေးရင် ပြန်တောင်လာမှာ .. အေးပါ နင့်ဟာနင် တောင်အောင်လုပ်အုံး နင်တောင်လာရင် ငါ ကုန်းပေးမယ် ဟ ဟ .. အဲဒီမှာ ပူစူး စကားလွန်သွားတာ ဖိုးဇော် အပေါ်ကို တက်လာပြိး လီးကပူစူး ပါးစပ်နားကို တေ့ထားတယ်
. ပူစူး နင်နဲ့ငါက လင်မယား ဖြစ်နေပြီနော် တသက်လုံး နေရမှာ .. ဖိုးဇော် ဘာပြောလဲ ဆိုတာ ပူစူး သိပါတယ် ပူစူး လီးကို ကိုင်လိုက်တယ် ပြီးတော့ အရင်တုန်းကလိုပဲ လက်နဲ့ အသာလေး လုပ်ပေးနေမိပြန်တယ် လီးက တဖြည်းဖြည်း ကြီး ကြီး လာပြန်တယ် အရင်က ပူစူး လုပ်ပေးဘူးတာက ပုဆိုးထဲမှာ အခု ပူစူး အပေါ်ကနေ ခွပြီး လီးကြီးကိ မြင်ရတော့ ပူစူး အသည်းတွေယားလာတာပဲ ဟို စကားကလဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားဘူးတယ် လိးကို ကောင်းကောင်း စုပ်တတ်ရင် ဘယ်မှမသွားဘူး ဒါဆို ဖိုးဇော် က ကိုယ့်ရည်းစားပဲ ဘာဖြစ်လဲ ပြီးတော့လဲ ယူကြမှာပဲ ပူစူး လီးကြီးကို ပါစပ်ထဲ ထည့်မလိုက်တယ် ကဲ ဘာဖြစ်လဲ နောက်လဲ လုပ်ရမှာပဲဟာ ဖိုးဇော် ဆီက မပီမသ အသံတော့ ကြားသား ဖိုးဇော် လီးကို ကြားဘူးနားဝ ရှိသလို လုပ်ပေးမိနေတယ် လီးစုပ်တတ်ရင် လင်က ဘယ်မှ မသွားတော့ဘူး မလား ဒေါ်လေးချို ပြောတဲ့ အသံ ပြန်ကြားမိနေပြန်တယ်
လီး ထိပ်က ဒစ်ကို သေချာလေး လုပ်ပေးလိုက် တင်းကားနေအောင် ကြီးလာလိမ့်မယ် လို့ပြောတာကိုး ပါးစပ် ထဲကနေ လီးကိုပြန်ထုတ်ပြီး သေချာကိုင်ရင်း ထိပ်က ဒစ်ကို ယက်ပေးလိုက်တာ တကယ်ပါပဲ လက်ထဲမှာကို သိသိသာသာ ကြီးလာတာ လီးကြီးကို ကိုင်ညစ်ရင်း အောက်က စောက်ပတ်ကလဲ အလိုလို လိုက်ပြီး ညစ်နေတယ် ခက်တာပဲ အချောင်းလိုက် ငုံလိုက်ပြီးမှ ပါးစပ်နဲ့ လိုးပေးမိတယ် . တော်ပြီဟာ ငါ လိုးတော့မယ် နင် ဖင်ကုန်းတော့ အဲတော့မှ အသေလိုးပြစ်မယ် .. ဟယ် ဘယ်လို .. တကယ်ပြောတာ နင့်ကို ဖင်ကုန်း လိုးချင်နေတာ ကြာလှပြီ .. ဟယ် လူစုတ် .` . ဘာဖြစ်လဲ ငါ့ဟာမလို့ပေါ့ သူများဟာ လျှောက်ပြောတာမှ မဟုတ်တာ လာပါဟာ နင့် ခါးကို ကိုင်ကိုင်ပြီး အသားကုန် လိုးချင်လို့ ကလေးလဲ တန်းရ .. ဟယ် ဖိုးဇော် အစုတ်ပလုတ် ကလေးက ပြောနေသေးတယ် .
. ဟုတ်တယ် သားလေး သားလေး ရအောင်လိုးမယ် နော် မေမေကြီး … ပူစူး ဘယ်လိုပြုံးမိမှန်းလဲ မသိသလို ဘယ်လို ကုန်းပေးမိမှန်းလဲ မသိတော့ဘူး ပပ ကုန်းတဲ့အတိုင်း ဖင်လေးကို ထောင်နေအောင် ကုန်းပေးနေမိတယ် ပြုံးမိတာက ဖိုးဇော်က သူ့က်ု မေမေကြီး တဲ့လေ ဖိုးဇော်ရယ် ငါတို့ တသက်မခွဲကြစတမ်းပါဟာ .. အင့် .. လိုးတာ တမျိုးပါလား . .. အင့် .. အို လူတောင် ရွှေ့သွားတယ် မတူဘူး ခုန ပက်လက်လိုးတာနဲ့က လုံးဝ လုံးဝ ပဲ တချက်ချင်း လိုးပေးနေပေမယ့် အရမ်းကြီးကို အားပါတာပဲ လီးကလဲ ပြောင်းပြန်ကြီး လိုးနေသလိုပဲ ထိလဲ မထိဘူး ဒါပေမယ့် အတွင်းသားတွေကတော့ လုပ်နေတယ်ဆိုတာ သိနေတာပေါ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပူစူး နံရံကို ခေါင်းတိုက်မိနေပြီ ဖိုးဇော်က အရှိန်မလျှော့သေးဘူး လုပ်ပါစေလေ ပြောရရင် ကိုယ့်လင်ဖြစ်နေပြီပဲ နောက်လဲ ကိုယ့်လင်ဖြစ်မှာပဲ လုပ်မလေ့စေ ကိုယ်ကလဲ ချစ်တာကိုး နော့ ဖိူဇော် အဲလို လုပ်ရင်း ပြီးသွားတယ် ပြီးပါစေ ဒါတွေက နဂိုကတည်းက ကြားဘူးပြီးသား အမစိန်ဆို တလတောင် သူ တခါ မပြီးရဘူးတဲ့ ကိုကြီးထွန်း နောက်တော့ အမစိန် ပြီးတဲ့အထိ နေလို့ရအောင် အရက်သောက်ပြီး လိုးမှ အမစိန် ပြီးတယ်တဲ့ ဒါတွေက စကားဝိုင်းတွေမှာ ကြားဖူးနေပြီးသားပါ ကိုယ်ကမှ အခုနက ပြီးလိုက်ရသေးတယ်
ပပ ဆိုရင် ဖိုးထိန်နဲ့ တုန်းက မပြီးလိုက်ရရှာဘူးတဲ့ ဖိုးထိန်က အရင်ပြီးတော့ ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ နောက်တခါ ထပ်တွေ့မှ ပပ ပြီးတာတဲ့ နှစ်ယောက်သား ဖက်အိပ်နေရင်း တွေးနေမိတာပါ ပြီးတော့ လက်ကလဲ ဖိုးဇော် လီးကို အလိုလို ကိုင်နေမိတယ် ဖိုးဇော် လက်တွေက ပူစူး နို့တွေကို လာကိုင်ပြန်တယ် ပူစူး လက်ထဲက ဖိုးဇော် လီးကြီးကလဲ ပြန်ကြီးလာပြန်ပြီ လီးကြီးကို လက်နဲ့ အသာလုပ်ပေးနေရင်းက .. ဖိုးဇော် ငါ့ကို လုပ်ရတာ ကောင်းရဲ့လားဟင် .. ကောင်းတာပေါ့ ပူစူးရယ် အရမ်းကောင်းတာပေါ့ဟာ နင်ကလဲ ညနေကျရင် မပြန်နဲ့တော့နော် ငါတို့တဲကိုသွားကြမယ် ငါအားလုံးစီစဉ်ထားတယ်လေ .. . မဖြစ်ပါဘူးဟယ် အမေက ပြောထားတယ် နောက် တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက်မှ စဉ်းစားတဲ့ အခုက အရမ်းငယ်သေးတယ် မဖြစ်ဘူးတဲ့ အဒေါ်လေးကရော နင့်ကို မပြောဘူးလား . . အေးပါဟာ ဒါပေမယ့် ငါတို့ နေ့တိုင်း လိုးကြမယ်နော် . . ဟဲ့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ ငါတို့က ယူကြသေးတာလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ .. .. နင်ကလဲဟာ ရပါတယ် ငါကတော့ မနေနိုင်ဘူး နင်ကရော နေနိုင်လို့လားပြော .` ဖိုးဇော်က မေးနေရင်းကနေ ပူစူး စောက်ပတ်ကလေးကို လက်နဲ့ လာပွတ်ပေးနေတယ်
. နင်ကလဲဟာ နေ့တိုင်းမဟုတ်ပေမယ့် ဟိုရက်တွေဆိုရင်တော့ နင်နဲ့ တွေ့မှာပေါ့ .. ဘယ်ရက်တွေတုန်း .. .. ဗိုက်မကြီးတဲ့ ရက်တွေလေ အဲတာရှိတာ နင်မသိပါဘူး မိန်းကလေးတွေပဲသိတာ သူက ရာသီလာတာနဲ့ တွက်ရတာ အခုတောင် အဲဒီရက်မို့လို့ လိုးလို့ရတာ .. အခု လိုးလို့ရတယ်ဆိုလဲ အခုလိုးမယ် လာ .. ဟင် ဘာမှလဲ မဆိုင်ပဲနဲ့ .` . လာပါ ပူစူးလေးရယ် ငါ လုပ်ချင်နေပြီ .. ပူစူး ပေါင်လေးကို အလိုက်သင့် ကားထားပေးလိုက်တယ် ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဘူး ပူစူးလဲ တခါထပ်ပြီး ခံချင်လာပြီ ဒီတခါတော့ ပူစူး ရင်တွေ တုန်မနေတော့ဘူး ဖိုးဇော် လီးကြီး စောက်ပတ်ထဲ ဝင်လာမှာကို စောင့်နေမိတယ် လီးကြီးက စောက်ပတ်ထဲ တိုးဝင်လာတော့ ပထမ တုန်းကလို ပူစူး သဲသဲလှုပ် မဖြစ်တော့ဘူး လီးက လိုးပေးနေတဲ့ အရသာကို မျက်လုံးလေးပိတ်ပြီး တချက်ချင်း ခံစားနေမိတယ် စောက်ပတ်နဲ့ လီး က လိုးနေတာကို ဆွဲနေတာကိုသိတယ် ပါးစပ်ကလဲ တိုးတိုးလေး လိုက်ပြီး ညည်းနေမိတယ်
အား—- အား—– အား— . ဒီတခါ လိုးတာ ပိုပြီး အရသာရှိတယ် ဖိုးဇော်ကလဲ ပုံမှန် တချက်ချင်း လိုးပေးနေတယ် ပူစူး မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ဘာက်ုမှ မကြည့်တော့ပဲ စောက်ပတ်ထဲ လီးကြီး လိုးပေးနေတာကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီး စောက်ပတ်သားတွေကို လီးနဲ့ထိထိနေတာကိုပဲ အရသာ ခံနေမိတယ် ကောင်းလိုက်တာ လီးထိပ်ကြီး တိုးဝင်လာတိုင်း ပူစူး တိုးတိုးလေး ညည်းမိတယ် စောက်ပတ်သားတွေကို လီးကြီးတိုးတိုင်း ကောင်းသလို လီးကြီး ပြန်ထုတ်တော့လဲ တမျိုးပဲ ပြန်တိုးဝင်လာမှာကို သိနေသလိုပဲ ဖိုးဇော်ရယ် ဖိုးဇောက်က ပူစူး ဆီးခုံကို လက်နဲ့စမ်းတယ် ပူစူး လဲ သတိထားမိပြီ ဖိုးဇော် လီး ဝင်နေတာ ပူစူး လက်ကို ဖိုးဇော်က တင်ပေးတယ် လက်မှာ ဖိုးဇော် လီးကြီး ဝင်လာတိုင်း လာထိနေတယ် ဝင်နေတဲ့အတိုင်း လက်မှာ လာထိနေတယ်
ဖိုးဇော်ရယ် ငါ့စောက်ပတ်က ကောင်းရဲ့လားဟင် နင် လိုးရတာ ကောင်းရဲ့လား . အရမ်းကောင်းတယ်ဟာ ဒီတိုင်းဆို ငါ ပြီးသွားတော့မယ် နင် အပေါ်က တက်လုပ်ပေးအုံး .. ဖိုးဇော် ပက်လက်အိပ်လိုက်တော့ လီးကြီးက ထောင်လုံ့ ပူစူး မချင့်မရဲနဲ့ ဖိုးဇော် လီးထိပ်ကြီးကို လျှာနဲ့ ထိုးထိုးပေးမိတယ် အရမ်းချစ်လို့ပါ ထိပ်ကြီးကို ငုံပြီး ပြွတ် ကနဲမည်အောင် လုပ်ပလိုက်တယ် .. ပူစူး ပူစူးလေးရယ် ..` ဖိုးဇော် မပိမသ ဖြစ်နေတုန်းမှာပဲ ပူစူး အပေါ်ကနေတက်ခွ နောက်ပြီး လီးကြီးကို ကိုင်ပြီးတော့ စောက်ပတ်နဲ့ သေချာ တေ့ထားလိုက်မိတယ် စောက်ပတ်လေးထဲ မထည့်ချင်သေးတော့ စောက်ပတ်နဲ့ လီးထိပ်ကြီး ပွတ်နေမိတယ် စောက်စိတွေကိုလဲ လီးထိပ်ကြီးနဲ့ပွတ် တဆက်ထဲ စောက်ပတ် ပြီးတော့ ဖင်အထိရောက်အောင် ဆက်တိုက် ရှေ့နောက် ပွတ်နေပြီးမှ စောက်ပတ်နဲ့ အသာလေး ဖိချပေးမိတယ် နဲနဲလေးပဲ အဲဒိ စောက်ပတ်အ၀ နဲ့ပဲ လုပ်ပေးနေမိတယ် အဲတော့မှ ပူစူး စောက်ပတ်က ပိုပိုပြီးယွလာတာ စောက်ပတ်ထဲက မခံနိုင်အောင် ဖြစ်လာတော့မှ တချက်တည်း ဆောင့်ချမလိုက်တော့ လီးကြီးက တန်းကနဲ ဝင်ချလာတာ ကောင်းလိုက်တာ .
အား–. အားရပါးရ အောင်ပလိုက်ပြီး စောက်ပတ်နဲ့ ဆက်တိုက် ဆောင့်ဆောင့် လိုးပလိုက်ပြီးမှ ခဏ နားပြီး လီးကြီးကို ဒီအတိုင်းပဲ လှုပ်ပြီး လိုးပေးနေမိတော့တယ် ဖင်ကို ရှေ့နောက် လှုပ်ပြီး လိုးရတာ ဘယ်လိုမှန်း မသိဘူး လီးကြီးက စောက်ပတ်ထဲမှာ အချောင်းလိုက်ကြီး စောက်ပတ်သားတွေကို လာလာပွတ်နေတာ သိပ်အရသာရှိတာပဲ ပူစူး တွေးမိပြီး အမစိန် ပြောသလို ဖင်ကို စကောဝိုင်းသလို လုပ်ကြည့်မိတယ် အို တကယ် အမစိန် ပြောသလိုပဲ လီးကြီးက စောက်ပတ်ကို အကုန်ထိအောင်ပွတ်နေတယ် တခါ ရှေ့ကို လက်ထောက်လိုက်ပြီး ခါးမကုန်းပဲ ခါးနဲ့ လီးကြီးကို ကပ်ပြီး ညောင့်ကြည့်တော့ ဟုတ်သားပဲ လီးကြီးက ဒုတ် ဒုတ် ဆို လာလာ ထိနေတယ် အမစိန် ပြောတဲ့ ကပ်သာညောင့် စောက်ပတ် ထိချက်သိမယ်ဆိုတာ ကျေးဇူးပါပဲ အမစိန်ရေ ဟိုတုန်းကတော့ သူတို့ပြောတာတွေကို ရှက်သလိုလိုနဲ့ အခုတော့ တကယ် အသုံးဝင်နေပြီ ပူစူး အမစိန်တို့ စကားဝိုင်းက နည်းတွေကို စမ်းရင်းစမ်းရင်းနဲ့ စောက်ပတ်က မနေနိုင်တော့ဘူး စောက်ရေတွေ ပန်းထုတ်မိပြီ ကောင်းလိုက်တာ ကိုယ်က စိတ်ကြိုက် တက်လုပ်ရလို့လားမသိဘူး နောက်ဆုံး အရေတွေညစ်လို့ ထပ်မထွက်တော့မှ ဖိုးဇော်ပေါ်က်ု မှောက်ချလိုက်မိတယ် .
. ဖိုးဇော်ရယ် ငါ ပြီးသွားပြီဟာ ငါ့ကို နင်ပဲ တက်လုပ်တော့နော် နော် ကုန်းပေးတာ ကြိုက်တယ်မလား ငါ ကုန်းပေးမယ်နော် နော် ..` ပူစူး ဖင်လေးကို ထောင်နေအောင် ကုန်းပေးထားမိတယ် ဖိုးဇော်ကလဲ ပူစူး ခါးကို ကိုင်ပြီး တဘတ်ဘတ် မြည်အောင်ကို အသားကုန် လိုးနေတယ် လိုးပါစေ စိတ်ကြိုက်သာ လိုးပါစေ စိတ်ကြိုက်လိုးတာ မခံရင် ကိုယ့်ကို ထားသွားမှာပေါ့ ဖိုးဇော် စိတ်ကျေနပ်အောင် ပူစူး အလိုက်သင့် လိုက်လိုက်ပြီး အော် အော် ပေးနေမိတယ် ကိုယ်က အရမ်းချစ်တာကိုး စောက်ပတ်နဲ့ ညစ်လို့ကတော့ မရတော့ဘူး . အာ ဟင့် .. လီးကြီးက လိုးနေရင်း ထွက်သွားတော့ ပြန်အလိုးမှာ စောက်ပတ်ကနေ ချော်ပြီး ဖင်ဝကို သွားဆောင့်မိတယ် ပူစူးဖြင့် လန့်ဖြန့်သွားတာပဲ တော်ပါသေးရဲ့ စောက်ပတ်ကိုပဲ ဆက်လိုးနေလို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ အမစိန် ပြောသလိုပါပဲ ကိုယ့် ယောင်္ကျား ဆိုတော့လဲ ဖင်လိုးမယ်ဆိုလဲ အသာတကြည်ပဲ ဖင်ခံပေးရတာပဲ ကိုယ်က အပေါကိအစုံ အလိုးခံထားမှ မယားငယ် ဆိုတာ မကပ်နိုင်တာ ဆိုပဲ အေးလေ ဖိုးဇော် က ဖင်ခံ ဆိုလဲ ပူစူး မူမနေပါဘူး ကိုယ်က ချစ်တာကိုး လုပ်ချင်တာ လုပ်ပလေ့စေ ကိုယ့်ကို ချစ်နေမယ်ဆို ရပါပြီ။
သူ ဌေး မ လေး မာ မာ နွယ်